Maxay ka Qabtaa Xuquuda Saxafada In Sheekooyinka xaafadaha Looga Sheekaysto Laga baahiyo Warbaahinta”warbxin Akhri” | Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Maxay ka Qabtaa Xuquuda Saxafada In Sheekooyinka xaafadaha Looga Sheekaysto Laga baahiyo Warbaahinta”warbxin Akhri”
Waxa baryahani danbe ay noqtay saxaafada wax qofkasta sheegto isla markaasina qofkasta oo afka soomaaliga qori karaa website-iska furto waxana aad u sahlan furashada website-yo loogu talo galay faafinta warraka boga bogaandada ah iyo beenta meel ku dhac ku ah xuquqda saxaafada.
Saxaafada ayaa noqotay mid Ay ku soo birayeen dhalin yaro ayaga afaka soomaaliga kaliya bartay hase ahaae anan aqoon xuquqda saaxada iyo shuruucda looga baahan inuu maro saxafiga,iyo ta looga bahan yahay inuu ddaka akhrisanaya ugudbiyo.
Tan iyo buburka kajira dalka soomaaliya waxay noqotay saxaafada mid dano gaara lagu fuliyo,inkasta oo ayjiraan saxafin afkoooda ay kula fududaatay baahinta waxa yabaha ka mamnuuca ah saxaafada ayaa hadana waxa jira cabtarool la’an ka jira warbaahinta soomaalida.
saxafada oo ah midi labo afleh oo hadba sida larabo wax loogu dhufto aya waxa inta badan ka mamnuuc ah in warbixinta qoraysdaa noqoto mid aanan sal iyo raad lahayn isla markaasina adiga dib kugu soonoqonaysa,waxana taasi dhaanta intaa saxafi sheegan lahayd inaad sheegato Ruufiyaan dadka soomaalida wararka qaldan ukala gudbiya.
”Hadaba aah usoo dago dulucda sheekadayda’‘waxaa jira Qaar kamid ah saxaafada soomaalida oo cadeystey inay sigaara udaabacaan wararka beenta iyo Boga bogaandadad ah,kuwasi oo Xuququda saxaafada Aykala qiibo bad natay dhowr shalin-oo soomaalia.
Igoona baahiya Hadalada Haweenka iyo dadweynaha gurigooda kaga sheekaytaan,waxana ay dhowr dhalin yaro ah Uqorteen soo ogaanshaha sheekooyinka xaafadaha laga sheekaysto waana mid meel ku dhac ku ah magaca saxaafada loogana bahan yahay inay Jawab ka soo saraan dadka nocaasi ah Ururada ku magacaaban Saxafinta.
waxana kamid ah TV-ga Universal oo saado ka hor baahiyey TELECONFRANCE Ama Hadalada Qadka telefoonka kaga wada hadlaan Qaar kamid ah madaxda maamul goboleed yada ka jira dalka soomaaliya.
Maxay tahay jawabta looga bahan yahay Ururada saxafada…?
Saxafada waa midi labo Af leh,waxana looga bahan yahay inau Ururada saxafinta jawaab ka bixiyaan dadka sida gar ka ah ugu magacaaban saxafada hase ahatee mecrophonenada hoos dhigaya hadalada Xaafaha looga shekaysto.
Madama ay tahay mid meel ku dhac ku ah xuququda saxaafada caalmiga ah in qof sigaara warbixib boga bogaando ah uga faafisid midaasi oo noqon doonta midaan meelna sal ku lahayn.
Waa maxay warar….?
inta badan warar waa dhacdo tagan oo leh goob joog Ama xigasho,taasi oo ku dhisan dhab,cadaalad,iyo sinan cida wararka laga baahinayo, taasi oo dhanka wanagsan iyo samaeynta ay bulshada ku yeelan karto laga fiirinayo.
waxana inta badan dhal;in yaro wararka ku daabaca website aymuujinaysaa inay tahay kuwa garab maray xuquqda saxafada ay leedahay.
Cidkasta masheegan karta saxafi Ama dhkhtar….?
Dhakhtarka waxa uu u baahan yahay inuu leeyahay aqoonta dhakhtarnimo saxafigana waa lamid waana inuu haystaa qimrada saxaafadnimo oo ah mid ku dhisan cadaalad iyo ka run sheegida wararka uuqoray,waxana saxafin badan sigara loogu weeraray warbixino ay ka qoreen cidgaara taasi oo ah mid naftooda samayn ku yeelatay.
Ugu danbeyn waxa loos oo jeedinaya Saxafinta website-yada ku daabaca warraka beenta ku salaysan inay joojiyaan,isla markaasina ku badalaan cadaalad iyo sinan iyadoo ladhowrayo Xauquqda saxaafada.
Short URL: http://allssc.com/?p=33393
Posted by SSCkenya on Jul 8 2012. Filed under Wararka.